Ady & Fifandirana · Septambra, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Ady & Fifandirana · Septambra, 2013
Tantara mikasika ny Ady & Fifandirana tamin'ny Septambra, 2013
Bangladesh18 Septambra 2013
Bangladesh : Ireo Hetsi-Panoherana Tany #Shahbag
Bangladesh15 Septambra 2013
Efa nokotrehina am-polo taona maro ity fotoana ity. Mitaky ny hanamelohana ho faty ireo nanao heloka an'ady nandritra ny nanafahana an'i Bengladesh teo ambany vahohon'i Pakistana tamin'ny 1971 ireo olona an'hetsiny nameno an'i Shahbag, fihaonan-dàlana iray ao afovoan'i Dhaka renivohitra.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana15 Septambra 2013
Afrika Mainty14 Septambra 2013
Pro-Assad Sy/Na Mpanao Fihetsiketsehana Manohitra ny Ady?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana11 Septambra 2013
Tsy mety miaraka izany sady mpanohana an'i Assad no mpanohitra ny ady izany, hoy i Farah ao amin'ny Twitter.
Mampiverina Ny Resaka Mangarahara, Filaminana, Asa-gazety Ary Fananahana Ny Raharaha Chelsea Manning
Amerika Avaratra09 Septambra 2013
Manao ahoana ny fiantraikan'ity afera Chelsea [Bradley taloha] ity amin'ireo mpamoaka tsiambaratelom-panjakana rahatrizay, mpanao gazety, sy ny fikambanana trans.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana08 Septambra 2013
Mihamafy hatrany ny tabataban'ady noho ny fiomanan'i Etazonia amin'ny hetsika daroka baomba "hanasazy" an'i Syria. Tao amin'ny aterineto, nanjary manam-pahaizana momba an'i Syria tanatin'ny indray alina daholo ny mpiserasera
Miomana Ho Amin'ny Hetsika Fanapoaham-Bilany Manerana Ny Firenena i Kolombia
Amerika Latina07 Septambra 2013
Ny teny ifankafantarana Twitter #CacerolazoPor no ahafahan'ny mpiserasera Kolombiana mizara ny antony hidinan-dry zareo an-dalambe sy hanao fihetsiketseha-panoherana.